Imbali kunye neNkcubeko Ezisiseko
Isichasti saseVictoria sisetyenziselwa ukuchaza into ethile kwixesha lolawulo luka- Queen Elizabeth . Kwaye, njengoko uVictoria ehleli etroneni ngaphezu kweminyaka engama-60, ukususela ngo-1837 ukuya ku-1901, eli gama lisetyenziselwa ukuchaza izinto zangekhulu le-19 ngokubanzi.
Igama lisetyenziselwa ukuchaza iintlobo ezahlukeneyo zezinto, ezifana nabalobi bama-Victori okanye i-Victorian architecture okanye iingubo zamaVistori kunye nefashoni.
Kodwa ekusebenziseni kwayo okuqhelekileyo igama lisetyenziselwa ukuchaza isimo sengqondo somntu, esichaza ugxininiso ekuziphatheni kokunyaniseka kokuziphatha, ukunyaniseka nokucoca.
UKumkanikazi uVictoria ngokwakhe wayevame ukubonwa njengomntu ongathandabuzekiyo kwaye unento encinci okanye engekho nto. Oku bekufanelekile kwinxalenye yakhe yokuba sele engumhlolokazi ngexesha elincinane. Ukulahlekelwa yindoda yakhe, uPrince Albert , yayibuhlungu, kwaye ubomi bakhe bonke bembethe iimpahla zokulila.
Inkcazo yexesha lama-Victori njengento ephazamisayo yinyani, kunoko. Umbutho ngelo xesha kwakusemthethweni kakhulu. Kodwa ezininzi iinkqubela zenziwa ngexesha lama-Victorian, ngokukodwa kwimimandla yoshishino kunye nobuchwepheshe. Kwaye kwenzeke nokuhlaziywa kwamanye amazwe.
Esinye isibonakaliso senkqubela phambili yezobuchwepheshe yayiza kuba yinkcubeko enkulu eboniswe eLondon, iMiboniso Enkulu ye-1851 . Umyeni ka-Queen Victoria, uPrince Albert, wayilungisa, kwaye uKumkanikazi uVictoria wavakatyelela iimbonakalo ezintsha kwiCallstal Palace kwizihlandlo ezininzi.
Kwaye abaguquleli bezenhlalakahle babenomdla kubomi base-Victori. UFlorence Nightingale waba ngumqhawe waseBrithani ngokusungula ukuguqulwa kwakhe kwi-nursing profession. Kwaye i-novelist uCharles Dickens yakha iziqendu ezibalaselisa iingxaki ebantwini baseBrithani.
UDickens wayencibilikise ubunzima beentsizana zabasebenzi baseBrithani ngexesha loshishino.
Yaye ikhefu yakhe yeklasi, iKarimesi yeKarimesi , yabhalwa ngokukodwa njengengqungquthela yokunyanga kwabasebenzi ngetlasi eliphezulu elikhukhulayo.
I-Victorian Era yayiyithuba eliphakamileyo loBukumkani baseBrithani, kwaye ingcamango yama-Victori ayicinezelekileyo yinyani nakwizenzo zamazwe ngamazwe. Ngokomzekelo, ukuvuswa kwamagazi ngamabutho asekuhlaleni aseIndiya, iSepoy Mutiny , yahlonywa ngonya.
Kwaye kwiColoni yaseBrithani ecaleni kwekhulu le-19, iIreland, iindwendwe zangexesha elide zafakwa phantsi. AmaBritani nawo alwa nakwezinye iindawo ezininzi, kuquka iimfazwe ezimbini e-Afghanistan .
Naphezu kweengxaki kwiindawo ezininzi, uBukumkani baseBrithani bebumbana ndawonye ngexesha lolawulo lukaVictoria. Kwaye xa wayegubha iminyaka engama-60 kwitrone ngowe-1897, amajoni avela kulo lonke ubukhosi atyhutyha ngexesha lokubhiyozela okukhulu eLondon.
Intsingiselo Yomntu "Wamaxhoba"
Mhlawumbi inqaku elichanekileyo legama elithi Victorian liyakunciphisa kuphela kwiminyaka yee-1830 ukuya ngasekuqaleni kwekhulu lama-20. Kodwa, njengokuba kwakukho ixesha elininzi okwenzekayo, igama liye lithatha ezininzi iingcamango, ezihluka kwimbono yokunyanzeliswa kuluntu kwiinkqubela phambili kwezobugcisa. Kwaye njengoko i-Victorian Era yayinomdla kakhulu, mhlawumbi loo nto ingenakugwema.
Iingcaka ezakha indlu
Indlela iRhode Island Colony yasungulwa ngayo
Fumana iLizwi lePalic Means
AbakwaMasipala nabahlali abahlala e-Asia
Inkampani ye-East India
Ikhalenda kaJanuwari yeziBalo eziBalulekileyo kunye neZokuzalwa
Ngaba sifanele sisebenzise i-AD okanye i-CE?
IKhabhinethi yeKhabhinethi, uMvelaphi weKota yezoPolotiki
Iimpawu zeMidlalo zesiNgesi
I-Soft Rock okanye i-Adult Contemporary '80s Abaculi
Igalari yeMiboniso ekhethekileyo - I-Glitter and Doom: Iimifanekiso zeJamani ezivela kuma-1920
Biography kaGary Cooper
Ukhokelo Olukhokelwayo lweeNqila ezili-11 zeSilik Road
Zhou Dynasty, eChina (1046-221 BC)
Indlela yokubeka umgca kwi-Reel Reel
Ulwahlulo lweDarikhi kwaye ngubani ohlala kuso?
Amagama amaninzi kunye namaNicknam kubahlali baseMerika
Iingoma ezi-50 eziphambili zeRip zika-2010
Iintlobo zeeLwimi ngesiNgesi
Uvavanyo lweDrive: 2010 Ford Mustang V6